Izindatshana zikaSavannah Marie Martech Zone |
Imibhalo nge USavannah Marie
"Bekuyindawo epholile ngempela ukuchitha isikhathi kuze kube wonke umuntu uqala ukuya khona." Lesi yisikhalazo esivamile phakathi kwama-hipsters. Abathengisi babelana ngokukhungatheka kwabo; okusho ukuthi, uma ufaka igama elithi “cool” esikhundleni seligama elithi “cool” Isiteshi esihle sokumaketha singalahlekelwa ukukhanya kwaso ngokuhamba kwesikhathi. Abakhangisi abasha banake kude nomlayezo wakho. Izindleko ezikhulayo zenza ukuthi ukutshalwa kwezimali kungabi nenzuzo encane. Abasebenzisi abajwayelekile bayadinwa futhi badlulele emadlelweni aluhlaza. Ukugcina
NgoMsombuluko, Disemba 30, 2013 NgoLwesibili, Januwari 21, 2014 USavannah Marie
Umphakathi nempilo kukonke kubonakala kuhamba ngesivinini esincane; ukubamba noma ukuphuthelwa yisiqubulo samabhizinisi amaningi. Eqinisweni, impilo emzileni osheshayo ithathe incazelo entsha ngokuphelele ngokwethulwa kwamawebhusayithi akhona okwabelana ngokuqukethwe okuyifomu elifushane - iVine, iTwitter neBuzzFeed yizibonelo ezimbalwa nje, ezithandwayo. Ngenxa yalokhu, imikhiqizo eminingi isuse ukugxila kwayo ekunikezeni imininingwane amakhasimende ayo ayidingayo ngamazwibela amafushane
Kuyo yonke le minyaka embalwa edlule, i-infographics ibikhona yonke indawo futhi ngesizathu esihle. Izibalo zivame ukudingeka ukwengeza ukwethembeka, futhi ama-infographics enza kube lula ukudiliza imininingwane okungenzeka ukuthi ibinzima kakhulu kumfundi ojwayelekile. Ngokusebenzisa i-infographics, idatha iba yokufunda futhi kumnandi ukuyifunda. I-infographic Evolution Njengoba i-2013 isizophela, i-infographics iyaphinda iyashintsha ukuthi abantu balugaya kanjani ulwazi. Manje, ama-infographics awekho